Kumanaan ka barakacday dagaalada ka socda Shabeelooyinka | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Kumanaan ka barakacday dagaalada ka socda Shabeelooyinka
Kumanaan ka barakacday dagaalada ka socda Shabeelooyinka
“Basra ayaan ka soo qaxay, waxan ka soo qaxay dagaal iyo rabsho iyo hubka la isku ridayay, caruurta ayaan la soo baxsaday, dadkeenii, beertinii iyo dhulkeenii ayaan ka soo tagnay, inta ayaana ku dhibaataysannahay, waa soo dhibtoonay, dhib inooma harsana.”
“Basro ayaan ka soo qaxay, dagaal xoog leh ayaa dhacay, dagaalku wuxuu bilowday maalin Isniin ah, nafta ayaan la soo cararnay, dagaalkuna wuu sii xoogeystay, halkan ayaan joognaa, wax aan ku haysanana ma jiraan, dadkii xaafadda daganaa oo dhan way soo qaxeen.”
Illaa hadda ma jirto cid u gurmatay qoysaskan cusub marka laga reebo qoysaska uga soo horeeyay xerooyinka oo wixii ay kari kareen la qabtay, hayeeshee ma haystaan hoy xiligan oo roobabka dayrtu ay ka da’ayaan magaalada Muqdisho iyo Hareerraheeda.
In ka badan Hal milyan oo qof ayaa sanadkan oo kaliya ka barakacay deegaanadii ay ku noolaayeen sababo la xiriira colaadda iyo daadad soo rogmaday dalka Soomaaliya sida ay sheegayaan hay’adaha gargaarka. Kala bar dadka Soomaalida oo ah 6.7 milyan oo qof ayaa u baahan gargaar aadaninimo oo degdeg ah.
Previous articleWasiirka cusub ee Gaashaandhiga oo xilka loo dhaariyay
Next articleMore than 10,000 local residents are reported displaced in Middle and Lower Shabelle, Somalia